“Waxaanahay Chelsea marnaba ma niyad jabno”… Hazard oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Newcastle – Gool FM
(Chelsea) 26 Agoosto 2018. Chelsea ayaa guul muhiim ah kusoo gaartay meel ka baxsan garoonkeeda, kadib markii ay 2-1 kusoo garaacday Newcastle United kulankooda saddexaad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedka cusub.
Eden Hazard ayaa wuxuu kasoo muuqday saxaafada kadib markii uu maanta kusoo bilaawday markii ugu horeesay uu kasoo muuqday shaxda tababare Maurizio Sarri, wuxuuna farxad weyn ka muujiyay guushii ay ka gaareen Newcastle United.
“Waan u qalanay inaan badino kulankan, qof walba wuxuu u maleeyay inuu ku dhamaanayo barbaro, laakiin marnaba ma niyad jabin sababtoo ah waxaanahay Chelsea”.
“Waxaan sameynay fursado badan, si fiican ayaan u ciyaarnay, laakiin ma diidayo inaan dareemay daal, sidoo kale kooxda oo dhan, balse sidaas oo ay tahay guusha waa muhiimada koowaad”.
Chelsea ayaa haatan leh 9 dhibcood kadib 3 kulan ay kasoo ciyaartay horyaalka Premier League xili ciyaareedka cusub, taasoo muujineysa sida wanaagsan ay ku bilaabaatay, waxayna hogaanka kula dagaalamayaan kooxda Liverpool.
Jorginho waa Macalinka BAASKA......(Arag RIKOODHKA uu caawa dhigay)